Akwụkwọ akụkọ Juve - Akwụkwọ akụkọ nke ụmụaka na ụda kpakpando na oge
Home Tags Akwụkwọ akụkọ Juve Football
Nabata na Derenda Juve nke Akwụkwọ Ụmụaka Gbasara Ịkọwapụta Ihe akụkọ nke Juve Football Stars na nke gara aga. N'ebe a, anyị emeela ka ndị na-agụ akwụkwọ nwee ohere, nke ga - eme ma Ugbu a na Juve Football Stars nke kpochapụwo bụ ndị na - egwu egwuregwu mara mma.
O doro anya na Old Lady emewo n'ezie football na ndị na-akwado ya. Ndị ọrụ ya ugbu a na ndị kpochapụwo ya kwesiri ịbụ ndị na-agba ọsọ na Football Brochure of Fame.
Edemede anyị na-enye gị mkpuchi zuru ezu nke Daniele Rugani Akụkọ gbasara nwata, ndụ, ndụ ezinụlọ, nne na nna, ndụ mbụ, ụzọ ndụ, enyi nwanyị, ndụ onwe onye, ​​na ihe ndị ọzọ ama…
vannyhenrico - October 25, 2019 0
LB na - ewetara aha otu zuru ezu banyere otu egwuregwu Star nke akpọrọ "Brunelleschi". Anyị Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunye akụkọ Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị…
vannyhenrico - August 15, 2019 0
LB na-ewetara ndị a akụkọ zuru oke nke onye egwuregwu bọọlụ nwere aha "Gypsy". Anyị Joao Cancelo Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara ...
vannyhenrico - February 12, 2019 0
LB na-egosi Full Story of a Football Manager onye amara aha ya bụ "Anchovy". Nwa anyị Massimiliano Allegri
LB na-egosi Full Story of a Football Genius with the nickname "El Tucumano". Nwa anyị Roberto Pereyra Akụkọ nke a na-agbakwụnyeghi akụkọ ndụ Eziokwu na-eweta ...
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mma mara aha ya bụ "King Kong". Ụmụaka Giorgio Chiellini Akụkọ nke a na-agbakwụnyeghi akwụkwọ akụkọ ...
vannyhenrico - August 11, 2018 0
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha "Immobile". Our Ciro Immobile Child Story plus Dupọ ...
LB na-egosi Full Story of a Football Genius with the nickname "Bonnibauer". Nwa Leonardo Bonucci nwa akwukwo na akuko nke oma ihe n'eme ka gi ...
vannyhenrico - August 4, 2018 0
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye a maara aha ya bụ "Benatia". Anyị Medhi Benatia Ụmụaka akụkọ ọzọ na-adịghị mma Biography Eziokwu ...
vannyhenrico - August 2, 2018 0
LB na-akọ akụkọ zuru ezu nke a na-akpọ Football Genius onye aha ya bụ "The Painter" mara. Ọrụ Miralem Pjanic nke anyị na-eme na akụkọ a na-emeghị eme.
Ulo oru Europe352